ओल्ड स्पाइस कहिले सुन्दर भयो? | Martech Zone
मंगलवार, नोभेम्बर 14, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म र मेरो छोराले केहि दुर्गन्धको लागि स्टोरमा आज रात दौडनु पर्ने भयो। हामी बदमाश वा केहि पनि थिएनौं ... ऊ भर्खर भाग्न थाल्यो र त्यसैले उसले मेरो दुर्गन्ध चोरी गर्यो। त्यसैले हामी स्थानीय Kmart मा दुर्गन्ध भाग मा पुग्छौं र उसले पुरानो स्पाइस उठाउन थाल्छ। पुरानो मसला? मलाई Old० बर्ष पहिले ओल्ड स्पाइस याद छ। यसको मतलब यो अब पुरानो मसला हो, हैन? मलाई लाग्दैन। सायद बुढेसकालको साथ, यो राम्रो भयो।
म उसलाई केहि राम्रो ओएल 'मेनन वा दायाँ गार्ड किन्न भन्दछु। ऊ होईन भन्छ। ऊ ओल्ड स्पाइस चाहन्छ।
म उसलाई भन्दछु कि म मेरो घरमा किशोरावस्था र ओल्ड स्पाइस जस्ता सबै दुर्गन्धहरू चाहन्न।
उसले मृत्युको पकडको साथ ओल्ड स्पाइसमा समात्छ।
म उसलाई पुरानो स्पाइस किन्छु।
ओल्ड स्पाइस कहिले सुन्दर भयो? हेक के भयो? एक दिन, तिनीहरू रस्फी क्रिसमस प्याकेजहरूमा साबुन सँगै राख्दै छन् र भोलिपल्ट उनीहरूसँग केही अविश्वसनीय वेबसाइट छ जब उनी हॉट हो भनिन्छ (वा ... युआरएलको हास्यको साथ, हुनसक्छ यो ... 'जब उनी शट हुन्छ।' वैसे पनि, तपाईं वास्तवमा सक्नुहुनेछ त्यहाँ आफ्नो आँखा क्यान्डी क्लिपहरूको साथ साइटमा तपाईंको आफ्नै बिट र भिडियो मिक्स गर्नुहोस्। मेरो भिडियो यहाँ छ।
पुरानो स्पाइस… एर… “ओएस” ले शान्त हुनको लागि रहस्य फेला पारेको छ: बदबू नलिन, सेक्सी महिला देखाउनुहोस्। अब मलाई थाहा छ कि किन मेरो छोराले उठायो।
यसका साथ शुभकामना छ, बिल! म संग गए दायाँ गार्ड XTREME.
उनीहरूसँग स्केटबोर्डरहरू छन् ... वू!
एक उत्तम तलब उठाउनका लागि शीर्ष १० सल्लाहहरू
मान्छे! तपाईंले मेरो दिन बनाउनुभयो, मेरो बुबाले सधैं पुरानो मसला लगाउनुहुन्थ्यो र मलाई गन्ध मनपर्थ्यो यद्यपि मैले यसलाई कहिल्यै प्रयोग गरेन किनभने यो सेतो मोजाहरू जस्तै चिसो थिएन। म अब केहि चाहान्छु र केहि राम्रो मार्केटिंग संग एक दिन सुरु गर्ने तरिका के हो। भिडीयो तातो छ, मलाई आशा छ कि म धेरै स्प्याश गर्दैन।
मलाई लाग्दैन कि मेरो बुबाले अब यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ... फ्लोरिडामा कालो मोजा, ​​स्यान्डल र सर्टहरू लिएर जानुहुन्‍न। 🙂
मलाई टेक्नोलोजीको बारेमा मनपर्ने चीजहरू मध्ये एउटा - यसले "सामान्य" मानिसहरूलाई रचनात्मक कार्यको लागि उपकरण दिन्छ। यस अवस्थामा, जो कोहीले पनि चलचित्र सम्पादन गर्न सक्छन्। यो अनुभवले सम्पादकले गरेको कामको कसैलाई पनि बढी प्रशंसा गर्छ। (र रमाइलो, पनि)।
जहाँसम्म पुरानो मसला जान्छ, मलाई यो कहिल्यै मन परेन - तर ती दिनहरूमा यो गाढा खैरो प्याकेजिङमा आयो। बोरिङ र सदाबहार अचम्मको। (त्यसपछि फेरि, यहाँ वरपरका किशोरकिशोरीहरू अब यताउता दौडन्छन्, गर्वका साथ आफ्नो अन्डरवियर देखाउँछन्। समय परिवर्तन हुन्छ। जीवन रमाइलो छ।)